InsPNMad: 156 mianadahy no nivoaka tao amin'ny Polytéchnique. | canalnews Madagascar
InsPNMad: 156 mianadahy no nivoaka tao amin’ny Polytéchnique.
mar 21, 2017 Mamitiana RASOLONIRINA A LA UNE, ACTUALITE, EDUCATION 0
Tsy mitsahatra ny mampiroborobo sy manondrotra avo ny kalitaon’ny fampianarana ao aminy ny sekoly ambony tsy miankina InsPNMad. Tsy mijanona fotsiny amin’ny lafiny fahasalamana izay efa mampalaza azy ny sekoly. Mivelatra amin’ny lafiny maha-olona sy ahafahan’ny tanora mivoatra. Saika efa misandrahaka any amin’ny faritra maro manerana ny Nosy mantsy ny ivon-toerana misy ny sekoly. Izany no natao dia ny mba ahafahan’ireo mpianatra tsy voatery miakatra ny tanan-dehibe. Ny mpanabe ihany koa dia efa matihanina avokoa ka tsy sarotra ny mampita ny haitao sy ny hairaha ho an’ny mpianatra.
Isan’izany izao ireto mpianatra izay nivoaka tao amin’ny polytéchnique Inspnmad ireto. 156 mianadahy izy ireo no nahazo tombontsoa tamin’izany nandritra ny fotoana nandratoany ny fahalalana tao. Lalam-piofanana mikasika ny , lalàna, fitantanam-bola, fadin-tseranana ary ny fikarohana no narahan’ireto farany. Nomena ny anarana « Mamiratra » ireto andiany ireto ka hitondra hazavana any amin’ny toerana izay hiasanany na hanokafany ny orinasany, misy kosa ireo mbola hanohy izay fianarany izay.
Nambaran’ny filoha tale jeneralin’ny sekoly Inspnmad, RAZANADRAKOTO Roland Albert, fa miavaka izy ireo mihoatra amin’ny andiany tany aloha. Ny fampiharana no tena nohamafisina mba ahafahan’izy ireo mahafehy ny asa izay ho sahaniny sy tsy hampanahirana ny mpampiasa intsony. Izy dimy mirahavavy etsy ambony ireto no sangany amin’ny sangany tamin’ireo lalam-piofanana ireo.
WEDNESDAY MORNING GROUP: Fikambanam-behivavy manohana ny ara-tsosialy ny mponina. AVG : Hiakatra fitsarana anio ireo olona roa saika hanondrana sokatra teny Ivato.